Inguqulo 0.3.0 – Bing (MSN) umhumushi
July 23, 2009 by okunikezwayo 1 Amazwana
Siyaziqhenya ukufaka ukwesekwa kule ukukhululwa inguqulo injini yesibili. Lo Bing (MSN) Umhumushi by Microsoft.
Imiphumela inikeza awafani kusuka yibo oyithola ku-Google Translate, ngezinye izikhathi ezingcono, ngezinye izikhathi sibi kakhulu.
Ukushiyeka ezincane for iphutha wokwenza kusebenze wukuthi le sevisi namanje in beta kanye isimemo oludingekayo, Sine encane kakhulu sikwazi ukudlulisela kanjalo uma ufuna eyodwa, nje uphawule ngalolu post, kuqala iza – ngesisekelo kuqala wakhonza.
Godu – asizange isebenze Bing umhumushi njengendlela iphutha umhumushi okuzenzakalelayo okwamanje futhi singathanda ukuzwa imibono yakho kuleso. Uma abantu eyanele ucela lesi sici, sizobe sifake umfutho zibe sikwazi lokhu ukukhululwa ezayo. In the Khonamanjalo – usuke wamukela ukuhlola lesi sici ngalolu site, nje qala ukuhumusha futhi asebenzise Bing isikisela inkinobho.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: bing (MSN) umhumushi, google ukuhumusha, minor, ukukhululwa, plugin wordpress